Blacksad. Ihe niile dara, site Juanjo Guarnido na Juan Díaz Canales. Nyochaa | Akwụkwọ dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Egwuregwu, Black akwụkwọ
Blacksad 6. Ihe niile na-ada - akụkụ nke mbụ bụ akụkọ ọhụrụ ha na-enye Juanjo Guarnido nwere ebe obibi (ise) na Juan Diaz Canales (script) nke a nwamba nchoputa site na 50s onye agbagoro 20. O bukwa okomoko dika ndi gara aga. Ekwuworị m banyere ha na ya, ya mere, taa m na-elekwasị anya na nke ikpeazụ. Nke a bụ nke m nyocha.
1 Blacksad 6. Ihe niile dara - Nkebi nke Mbụ - Nyochaa
1.1 Kedu ihe ọ bụ na agwa ya
Blacksad 6. Ihe niile dara - Nkebi nke Mbụ - Nyocha
Na mmalite nke Blacksad 6. Ihe niile na-ada - akụkụ nke mbụ anyị na-ahụ ọchị sardonic nke a agụ iyi na-ekwupụta nkebiokwu nke Oké Ifufe, nke William Shakespeare dere. Nke ahụ bụ ọgụgụ isi nke mbụ, dị ka ndị ọzọ nke vignettes ruo ọgwụgwụ. N'ime ya niile, akụkọ ahụ malitere site n'okwu ndị a John Blacksad duziri, na akụkọ onye nke mbụ ya site na mmalite nke usoro ya. Ebe na ndò.
Na ndụ bụ ihe ọ bụla karịa ihe ngosi bụ ihe anyị niile intuit. Mụ onwe m, na-enweghị ọrụ ọ bụla, abụrụla onye na-eme ihe nkiri ọkachamara. Ndị na-ege ntị na ndị na-eme ihe nkiri nwere oghere oghere nke agụụ dị ala na nhụsianya mmadụ. Ụmụ okorobịa ndị a tara ahụhụ na ndị mara mma bụ ndị otu m. Site na panorama dị otú ahụ, aghọtaghị m ihe mere ihe nkiri ka na-amasị m.
Ma n'ezie, nke ọma, kedu ka ị gaghị aga n'ihu? Ị ga-eme ya n'ihi na ị maara na ị ga-agụ ma hụ akụkọ ọzọ dị egwu site na nke a (ibe) nwamba nyocha. Enwebeghị obere ihe n'ime afọ 20 nke ịdị adị, eziokwu, n'ihi na eeỌ gwala anyị naanị akụkọ isii, mana kedu ka ha dị! Na nke ikpeazụ, na mgbakwunye, dị na Akụkụ 2. A na-ahazi nke abụọ maka 2023, ihe a ga-enwe ekele maka na ọ gaghị abụ 8 nke ọ were.
Mana egosipụtara ọzọ na ndị odee ha na-ewe ogologo oge n'ihi na nke ọ bụla bụ ihe bara nnukwu uru. Ugbua, Site na nkewa a, akụkọ ahụ na-agbasawanye nwayọ ma na-akọwapụta nke ọma. Enwere ike ịhụ nke a ma chọpụta ọ bụghị naanị na eserese zuru ezu karị, na vignettes ndị ọzọ bụ ihe nkiri cinematographic n'ezie, kamakwa na edemede nke Díaz Canales bụ onye, ​​n'aka nke ọzọ, na-aga n'ihu na-eme ya.
Ọ na-emekwa na ma ya na Guarnido gbakwunyere oge ahụ anọwo na-akpụzi ma na-emezi ihe ha kere eke na ọba ọhụrụ ọ bụla. Dị ka mgbe niile, a ga-enwe ndị nwere mmasị ha, ma ha niile dị mma, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmara nwamba a site n'ọmụmụ.
A ga-enwekwa ndị na-akpọ akụkọ a - ma ọ bụ usoro dum - nke a na-ebu amụma ma ọ bụ jiri clichés mee ihe otiti, mana ọ bụ nke ahụ. cliches na-arụ ọrụ, karịsịa na ụdị a.
Blacksad siri ike ka ọ bụ ihunanya, a zuru oke ụtụ noir kpochapụwo, ma edemede na sinima, site na mma ya ruo na scripts, na, karịsịa, na North America. Imikpu onwe gị na ibe ya bụ ime ya Aghụghọ, Ụra ebighi ebi, Ila n'iyi, Ụzọ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ ndị iwu na-akwadoghị, ebe ha na-agafe Philip Marlowe nke Bogart ma ọ bụ Jeff Bailey nke Mitchum dere Laghachi n'oge gara aga. Na otu puku na otu ọzọ ntụaka n'aha ọ bụla ọ bịanyere aka na ya Hammet, Chandler o mma Ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe nkiri ndị ahụ sitere na afọ ọla edo nke 40s na 50s na sinima.
Kedu ihe ọ bụ na agwa ya
En Blacksad 6. Ihe niile na-ada - akụkụ nke mbụ anyị nwere John Blacksad n'obodo mgbe ikpe gara aga mere na Amarillo (Texas), New Orleans ma ọ bụ Las Vegas. Na nke ahụ na-amalite na ihe ngosi ihe nkiri dị jụụ ga-eduga na a atụmatụ nrụrụ aka na ọdịmma ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọkwa kachasị elu nke na-agụnye onyeisi obodo, onye dị mkpa na-ewu ụlọ na onye nduzi nke ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ.
Anyị na ha nwere ọzọ Weekly, onye nta akụkọ tabloid na ihe kacha atọ ọchị, yana ihe na-emegide ịdị mkpa na ike nke Blacksad. Otú ọ dị, oge a ọ na-egwu a ọrụ kacha mkpa na nke siri ike na njedebe nke, n'ezie, na-ahapụ oghe na a Nnukwu ihe ijuanya na, ọ bụghị enyo enyo, nwere obere mmetụta. Na ntụle. Ọ bụ ihe kacha mma, nke ugwu ugwu Anglo-Saxon, nke na-ahapụ mmanụ aṅụ na egbugbere ọnụ na ihe niile atụmanya na ọchịchọ nke akụkụ nke abụọ ahụ.
N'ezie, anyị na-anọgidekwa na-anụ ụtọ nke ahụ anthropomorphic agwa okike tan Motley dị ka awụ akpata oyi na a Akara ngosi nke ụlọ Guarnido, nke ji Disney nnukwu ụgwọ na, n'otu oge ahụ, na-ewepụ ihe niile na-eme ka ụmụaka ma ọ bụ ndị na-emeghị ihe ọjọọ nke ụlọ ọrụ òké.
Ọ dịghị ihe dị ka a toki dị mpako dị ka ọchịchịrị Onyeisi obodo Schumann nke New York akpọtụghị ọnụ mana egosipụtara nke ọma na ụlọ, okporo ụzọ na ogige yana n'ime otu narị pasentị n'ime ime obodo America. Ọ dịghịkwa ihe dị ka a egbe nwere anya na-abanye n'ime na njiri ike iji nọchite anya Solomon, onye na-ewu ụlọ na-egwu ihe niile na onye ọ bụla si n'ebe dị elu nke na-enweghị ihe ịrụ ụka adịghị ya na-achịkwa ọdịdị.
Na site na elu ndị ahụ anyị na-agbada na omimi nke ụwa ebe, n'ezie, ndị ọrụ nọ ahuhu, oke ma ọ bụ oke n'ọchịchịrị nke Metro. Onye nnọchi anya ya, Kenneth Clark, bụ a bat onye ha chọrọ ịpụ n'ụzọ na ya mere o ji were Blacksad, kwadoro ya Iris Allen (ezigbo llama), onye isi ụlọ ihe nkiri nke Blacksad gbanarịrị esemokwu ya na ndị uwe ojii nke akụkọ a malitere.
Ya mere pusi anyị ga-eme ka ọ bụ a onye ọrụ karịa ịchọpụta ma kwụsị onye hitman (Logan, onye dị egwu na enweghị mkpụrụ obi aja aja bear) nke ahụ bụ nke òtù mafia na-achịkwa ụfọdụ weasels, mgbe niile na ajọ pịa na reminiscent nke Kedu onye ghọgburu roger rabbit?, ezigbo akụkọ ojii ọzọ nke sinima, ọ bụ ezie na ọ ka njọ na nwata.
Anyị ga-ahụkwa nke mbụ idepụta nke Kedu nke pụtara ọhụrụ, ebe Weekly na-arụ ọrụ, na anyị ga-ezute ọhụrụ ya director, oké iwe anụ ezi, nke kpebiri ịkụ nzọ na nta akụkọ nke na-agba mbọ karịa ihe na-akpali akpali.
Ndị ọzọ dị ike nke abụọ bụ Olaf, ihe ọjọọ akwa dane, Onye-ọkwọ-ọkwọ-ọkwọ-ọkwọ-nsọ ​​Sọlọmọn, na Shelby, ihe omimi azu mmiri onye na-arụ ọrụ kachasị ruru unyi maka egbe, onye na-eji ya eme ihe egwu.
Ihe niile na-agwakọta na mmanya ihe nkiri a, njikwa nke ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmahịa na akụkọ ochie nke ha na-echere. Na onye ọ bụla ejedebe n'ọnọdụ ndị na-enye nsogbu -Site na ọmarịcha ọdịdị ahụ na njedebe nke agwa dị oke mkpa maka Blacksad - nke na-emepe akụkụ nke abụọ jupụtara na mmetụta uche na ike.
Nke kacha mma: todo.
Kasị njọ: na ha bụ naanị 58 peeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Egwuregwu » Blacksad. Ihe niile dara, site Juanjo Guarnido na Juan Díaz Canales. Nyochaa
Anthology nnu, akwụkwọ ozi mepere emepe ka echefu echefu